Miami Mega Jail - Xabsiga Naarta subtitles February 21, 2020
Miami Mega Jail - Xabsiga Naarta subtitles
Waxaa lagugu eedeeyey dambi culus oo aad ku adkaysato inaadan gelin. Waxaad tahay qof aan waxba galabsanayn illaa iyo inta laga caddeeyo inuu dambiile yahay, laakiin taariikhdaas maxkamaddu waxay qaadan kartaa waqti yar kaalay. Isla waqtigaas, meesha aad dagantahay ayaa waxa lagu magacaabaa Miami Mega Jail. Weli wali dhalinyaro baad tahay, waligaa xabsi ma gelin ka hor mana tihid nin adag, sidaa darteed goorta Waxaa lagu geyn doonaa dabaqa halkaasoo lagu dejin doono ma rumaysan kartid waxa aad aragto. Rayrooyinka unugyada oo ay ka buuxaan tiro badan oo rag ah, oo qaylinaya, qaylinaya, oo u soo baxaya baararka iyo hanjabaadda adiga. Waa fowdo daran. Qolkaaga adiga kugu sugaya waa gudi soo dhaweyn ah 20 rag cadhaysan, oo khatar ah. Ciyaartani ciyaar kuma lihid, laakiin waa inaad la dagaallanto, qalad aadan sameynin taasi. Adigu hadda waxaad gashay goob dagaal oo dhimasha ah. Way adag tahay in la soo xusho taas oo ah xabsiga gobolka ugu xun Mareykanka sababtoo ah wax laga xumaado inay jiraan tiro badan meelaha u tartami kara inay noqdaan kan ugu sarreeya, ama laga yaabee inaan dhahno hoosta, liiska. Cid kasta oo joogtay meesha aan maanta ka hadlayno ma xumaan doonno Waxaan u dooranay tan ugu xun, taasi waa hubaal. Waxaan oran karnaa hadii aad lahadasho dambiilayaal adadag oo xabsi galay ama kabaxsan iyo xabsiyada badanaa waxay kuu sheegi doonaan in xabsi ka sii xun yahay. Dad badani waxay yiraahdaan xabsi wuxuu uga xaq badanyahay xabsiga iyo rabshadaha inbadan. Goobta aan maanta ka hadlaynaa waxaa loogu magac daray "Naarta Jannada", iyo kadib Daraasaddeena ma aqbali doono. Waxaan dhab ahaan ka hadlayno waxaa loo yaqaannaa "Asluubta iyo Dhaqancelinta Miami-Dade Qeybta ”, oo dhab ahaantii ka kooban dhowr cutub oo ay ku jiraan Xero Boot caan ah. Kuwa aan ka soo bixin xeradaas waxay ku dambeyn doonaan xabsi, qaarna weli waa yihiin da 'yarta. Xerada 'Boot Camp' waa sheeko kale gebi ahaanba, laakiin waxaan dhihi karnaa marka loo barbar dhigo xabsi waa xerada fasaxa. Nidaamka oo dhami wuxuu gaarayaa 7,000 oo qof, in kasta oo wax la mid ahi ay yihiin 114,000 qof ka gudub albaabada sanad walba - taasi waa ilaa 312 maalin. Tani waa goob mashquul ah, taasi waa hubaal. Wali, waa xabsiga 7-aad ee ugu weyn Mareykanka. Maxaabiista badidoodu kuma sii nagaan doonaan halkaas iyo celceliska waqtiga lagu qaatay nidaamka oo dhan waa 22 maalmood oo keliya, laakiin sidoo kale waxaad heli doontaa dad sugaya maxkamad illaa iyo inta shan sano. Tani waxay ina keenaysaa mid ka mid ah cutubyada waaweyn, oo ah meesha ugu badan ee ku dhufanaysa cinwaannada xaaladeeda foosha xun. Waxaa lagu magacaabaa Xarunta Xiritaanka Maxkamad-Horeynta, ama mararka qaar waxaa loogu yeeraa Xabsiga weyn. Waxay sida caadiga ah deggan tahay qiyaastii 1,700 oo qof markiiba. Intooda badan dadka halkaa jooga ayaa wali farsamo ahaan ahaan aan dambi lahayn maadaama aan la xaqiijin waa dambiile, laakiin sugida taariikhda maxkamaddaas waxay qaadan kartaa sannado. Ma fududa in la dego goorta noocaan oo kale ah, iyo haddii aad dhaaftay unugyada sagxadaha qaar waxaad arki doontaa sida waxyaabaha aan weli qalloocsaneyn ay yihiin. Waxaa jira maxaabiis ka joojisay xitaa la dagaalanka kiisaskooda sababta oo ah waxay kaliya doonayaan inay helaan ka soo baxaan halkaas, oo aan dambi lahayn ama aan ahayn, waxay kaliya doonayaan inay xabsi galaan. Dabaqyada ugu xun waa halka lagu hayo dambiilayaasha ugu khatarta badan oo lagu hayo dabaqyada shan iyo lix. Unugyada halkan jooga badanaa waxay ku yaalliin meel kasta oo u dhexeysa 15 illaa 25 rag ah kooxdankana dhexdeeda ayaa ku dhex jira nooc nooc ah. Maaddaama ragga halkaa jooga ay jecel yihiin inay wax badan dhahaan, waa badbaadinta ugu habboon, marka haddii aadan ahayn dagaalyahan waxaad ku adkaan kartaa waqti adag. Waxaad u baahan tahay cufan, waa inaad u dagaallanto. Hagaag, dan kama lihid inaad hesho meesha ugu xun ee qolka, laakiin maxaa dhacaya haddii qof uun yahay qaadataa alaabtaada? Sidii maxbuus halkaas joogay ayaa yidhi, Waxaan ka faa'iidaystaa kuwa itaalka daran. Hadaadan u halgalin waxyaabahaaga waxaad heli doontaa cadaab waqti ah, taasna waxaan uga jeednaa gudaha diidmada ah. Haddii aad qunyar gasho, waa lagu garaaci doonaa meel kasta oo aad tagtid mooyee ilaalin mooyee. Sida maxbuus kale ku sheegay waraysi maalintii kuugu horeysay qolkaaga waa inaad la dagaallanto sababtoo ah waxay rabaan inay kuu eegaan sida nin. Laakiin waa maxay sababta? Jawaabtiisu waxay ahayd hadaadan la dagaalamin waxay calaamad u tahay in wax kaa qaldan yihiin. Waxaa laga yaabaa inaad tahay cunqabate, sababtoo ah ma dooneynin inaad la dagaallanto. Waxay u muuqataa wax aan macquul ahayn, laakiin maxbuusku wuxuu yidhi kuwanu waa xeerarkii, taasi waa xeerka. Arrinku waa, maxaabiistu marna si cad uma sharixi karaan qawaaniinta koodh. Hal nin ayaa sharxay haddii qofku aanu u hallayn hal-fool ka dibna u hogaansan Rabbiga koodhka oo dhan code u garaaci karaa qofkaas. Mararka qaarkood nin waa la garaaci karaa xadgudubka ugu yar, mararka qaarna waa laga yaabaa inuu garaaco lagu eedeeyay wax uusan dhab ahaantii sameynin. "Yaa xaday cuntadayda?" Cidna kama jawaabto, oo kan ugu itaal yar ayaa garaaca garaaca. Awood ma liidid, eedda waad qaadataa. Waxay ahayd inuu sameeyo, sababtoo ah wajiga ayuu luminayaa hadii uusan sameynin. Sida qof walbaa halkaas ku leeyahay, waa inaad kaliya lashaqeysaa. Waxay leeyihiin mabaadi 'aan badan oo qorin oo ay duubtaan, midna waxaa la yiraahdaa GABOS. Taasi micnaheedu waa, “Ciyaarku kuma saleysan Sympathy”. Si ka duwan xabsiyada federaalka qaarkood, uma badna in lagaa qaadi doono garabka qof kasta. Xabsigu waa habka gladiatorial-ka aad uga badan yahay xabsiga, in kasta oo aan wax yar ka maqalno arxan-darrada nidaamyada xabsiga. Kaliya gal meelaha lagu kulmo ee maxaabiista hore ay kaga hadlaan khibradooda ku saabsan sixitaanka Nidaam oo waxaad ka heli doontaa qaar badan oo iyaga ka mid ah oo sheegaya in xabsi uu ka xun yahay. Dabcan cilladaysan ayaa ah in dadka intiisa badan aan xitaa lagu helin wax dambi ah waana la daaweeyay Ka sii daraya oo wajahaya hanjabaado badan. Waqtiyada ugu horeeya runti waa cabsi badan yihiin xaalado badana waa inay ahaadaan; maskaxda aan xanuun ku haynin halkaas; cuntada waa mid cabsi leh; Unugyadu waa wasakh badan yihiin wayna ku qaataan badankood waqtiga ay ku jiraan qolka. Waxaad arki doontaa maxaabiis fara badan oo dhahaya waxay sameyn doonaan “rasaas” si ay uga baxdo taas godhole. Rasaasta ayaa sanad ah. Maxay maxbuusyadu u noqon lahayd guriga xaalado ka sii dara, waxaad la yaabi kartaa. Hagaag, dhab ahaan looma jeedin inay qofka muddo dheer sii hayaan. Dhibaatadu waxay tahay, xitaa waxyar oo gaaban ayaa noqon kara cadaab oo dadka qaar ayaa sameeya wax intaa ka badan a Joogista gaaban haddii maxkamaddoodu dib u dhacdo. Xabsiga waxaa laga doonayaa inuu bixiyo nooc raaxo ah… Xabsigu waa cadaabta oo leh faa iidooyin, xabsiga ayaa dareemaya xanuun joogto ah oo ku saabsan purgatory iyo qaybta ugu xun miyaadan garanayn meesha looga baxo. Sidaas darteed, maxaabiista inta badan waa kuwa xanaaq badan, xanaaq badan, iyo jahwareer, iyo mararka qaar cadaalad ah doqon cad ah ka dib markii uu ka soo baxay 18-bilood oo crank-athon. Waxaas oo dhami, mala-awaalaa in loo diro meelaha ugu xun meelahaas? Aan ku soo noqonno adiga oo lagaa qaadayo dabaqa 6-aad ee Miami. Mar qolkii waardiyayaashu way baxayaan, waardiyaashaasuna waxay qirteen inaysan ka jawaabi karin in rabshadu si dhakhso leh u joojiso. Waxay qireen inay uga baxaan maxaabiista xeerarkooda. Waardiyaashaas ayaa si cad u sheegaya inaysan jirin wax ay ka qaban karaan garaacista daran, xatooyada, xatooyada. Kaliya kuma filna inay joogaan meel kasta oo ay arkaan wax walba. Mar alla markii ilaaladaasi kaa baxo, waxaa kuu hartay inaad kula dagaallanto dabaqa 5-aad iyo 6-aad ee foosha xun, dhisme hore ee bunni ah. Laakiin waa maxay sababta? Maxay iyagu iskumar u waayaan? Mid ka mid ah maxbuuska ayaa ku jawaabay, isaga oo leh, "Koodhku waa furaha." Taasi micneheedu waa maxay? Waxaa loola jeedaa haddii lagu arko inaad ixtiraam la'aan u muujisay qof aad la dagaallameyso, waad iska dhega tiraysaa. Qofna sabab umalaha sababta oo ah meeshaani maahan meel macquul ah oo lagu bilaabi karo. Waxay yiraahdaan dadku kama socdaan wadooyinka, ma dhahaan fahma koodhka jidadka. Nooca noocan ah ee galbeedka dabiiciga ah wuxuu ku laabanayaa waxa saynisyahannadu ugu yeereen a, “dhaqan sharaf. " Waxaad quudhsaneysaa nin, waad la dagaallami doontaa, oo seefo baad soo jiidan doontaa, toban meelood ayaad qaadanaysaa oo toogataa. Gudaha dibada waxaan tan uga soo baxnay inta badan, laakiin gudaha xabsiga koodhkan, dhaqankan sharafta leh, ayaa wali ku jira waayitaan. Xagga sare ee tuugada iyo la dagaalanka xabsiga weyn ee Miami waxaa lagu magacaabaa midka ugu xun gudaha Ameerika noocyo kale oo xadgudub ah oo lab ah. Waxyaabo argagax leh ayaa dhici kara markay waardiyayaashu kaliya kormeeraan unugyada hal mar saacaddii. Maxaabiista weaker ka hadhay waxay ugaadhsadeen uun ugaadhsadeyaasha. Nasiib wanaagse, xabsigu wuxuu sameeyay horumar badan sanadihii ugu dambeeyay, mid baa waxbadan sii kordha kaamirooyin ayaa la rakibay. Markaa waxa jira arin ku saabsan gurigan xabsi dad badan oo qaata dawooyinka dhimirka. Dagaalada maxaabiista waxay badanaa kala baxaan marka qof maskaxda ka jiran ahi u dhaqmayo qaab maxaabiista kale ma jecli. Sida Mashruuca Marshall uu sheegay, “Nidaamka xabsi ee Miami waa hay'adda ugu weyn ee loogu talagalay dadka maskaxda ka jiran ee Florida. ” Dadka dhimirka wax u dhinta badanaa waxay noqdaan ubax, oo dabaqa ayey ku soo dhacayaan iyagoo 20 nin qaadanaya u leexanayaa inuu jebiyo. Sidan ayaa loola dhaqmaa ka bixitaanka. Maalin kasta dadku waxay ku socdaan oo ka baxaan bukaan socodka. Waxay la mid tahay albaab albaab rogid ah oo dhiig ku daadanaya. Xaqiiqdii, waxaa jiray rabshado aad u badan oo ay Wasaaradda Caddaaladda sheegtay Miami-Dade Nidaamka xabsiga ayaa loo daayay maxaabiista iyo maxaabiista sidoo kale waardiyayaashu waxay la kulmeen qatar badan. Waa in wax la qabtaa, ayay tidhi waaxdu. Dhowr sano dib ayaa xabsiga loo wajahay baaritaan badan kadib markii sideed qof ay dhinteen shan bilood gudahood. DoJ wuxuu sheegay in saddexda dhimashada ee dadka dhimirka wax ka qaba ay gaar ahaan khalkhal gelinayeen. Hal nin oo baabuur wada markii la hakiyey wuxuu galay Sabtidii wuuna dhintay kan ku xigay Isniinta. Laba kale ayaa ku dhimatay usbuuc gudihiis, oo uu gudoomiye kuxirku sheegay in nidaamku yahay "mid aad u jaban." Waxaa soo baxday in sideed ka mid ah ee dhintay mid ka booday dhul gariir si uu uga baxsado maxaabiista waxaa ku soo socday isaga si ay u garaacaan. Midiyaha ayaa sidoo kale la sheegay. Dabaqa ugu xumaa, kaas oo tan iyo markii la xiray, waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa "Dhulka la ilaaway." Waxay ahayd heerka sagaalaad oo inta badan dadka maskaxda ka jirran lagu hayo. Halkaas ayaa ah halka maxaabiista inta badan looga tago oo la dayaco, xaalado badana way qaateen naftiisa. Gelinka dambe ee maanta heerkan maxaabiista ayaa dhulka seexday iyada oo aan busteyaal lahayn, in kastoo xarun cilmi-nafsi oo loo malaynayay inay ahayd mid bini-aadamnimo. Qaar ka mid ah maxaabiista ayaa la ogaaday inay ka cabanayaan musqulo, markii ay tani dhacdana warka ayaa meesha yaala waxaa loogu yeeray, "naxdin leh". Waxaa jiray qaylo dadweyne. Laakiin sidaad maqashay, weli waxaa jira dhibaatooyin marka qof maskaxda ka jiran uu quful galo la socda gladiators-ka waddooyinka ee casriga ah iyo xoogsheegashada kuwaas oo nambarkoodu uu ka maqan yahay qiimeynta aadanaha. Dhamaan sagxadaha oo dhami uma xuma sida sheekooyinka aan ka wada hadalnay, iyo xaaladaha qaarkood gaar ahaan dadka khatarta ah ama nugul ayaa keligood la degi doonaa. Si kastaba ha noqotee, ku soo afmeer mid ka mid ah dabaqyadaas dhaadheer ee ku jira xabsiga ugu weyn oo waad iska hubin doontaa Waxa ay u egtahay in lagu xidho mid ka mid ah xabsiyada ugu adag adduunka. Dhibaatooyin kale ayaa jira, sidoo kale, ilk aan caadi ahayn. Sanadka 2019, 17 qof ayaa loola cararay isbitaal meeshan sababtoo ah xoogaa xanuun lama filaan ah. Dhowr shaqaale ayaa la yimid, sidoo kale. Maxaa dhacay? Runtii qofna ma ogaan. Kooxda bambaanooyinka xitaa waa la wacay ka dib markii dareere qariib ah la helay, laakiin taasi waa noqotey inay dhib la'aan. Sababta ugu badan ee dadku hadda u billaabeen xaraashka waa qiiqa qiiqa qaar ka mid ah sunta daroogada. Haddii qiiqa neefsashada meel fog ka dhacey ay qofka ku hoos gelin karto lallabo xun, Maxay dhulka ku cabayeen sigaar dhexdeeda? Gaaska dareeraha ah? Kaliya waxay muujineysaa sida ay u waalan tahay meeshaas. Waxaan kaaga tageynaa dib u eegis aan ku aragnay bogga Facebook ee loogu talagalay xabsigaan: Ku soo dhawow cadaabta. Qofku wuu ka fiicnaan lahaa inuu dhinto intii uu sii adkaysan lahaa xadgudubka iyo silica lagu hayo qashinkan wasakhda ah, ee wasakhda leh. ” Ma dooneysid in laguu diro Miami Jail laakiin waxaad dooneysaa inaad gujiso mid ka mid ah labadan fiidiyowyo. Haddaba u daawo fiidiyaha hadda fiidiyowga kale ee weyn ee loo yaqaan 'Infographics Show ama kan' halkan Waxaad dooran kartaa mid uun haddii aad doorato oo u fiirso fiidyow kale hadda!
Miami Mega Jail - Xabsiga Naarta
<text sub="clublinks" start="1" dur="4.029"> Waxaa lagugu eedeeyey dambi culus oo aad ku adkaysato inaadan gelin. </text>
<text sub="clublinks" start="5.029" dur="4.521"> Waxaad tahay qof aan waxba galabsanayn illaa iyo inta laga caddeeyo inuu dambiile yahay, laakiin taariikhdaas maxkamaddu waxay qaadan kartaa waqti yar </text>
<text sub="clublinks" start="9.55" dur="1"> kaalay. </text>
<text sub="clublinks" start="10.55" dur="4.18"> Isla waqtigaas, meesha aad dagantahay ayaa waxa lagu magacaabaa Miami Mega Jail. </text>
<text sub="clublinks" start="14.73" dur="3.93"> Weli wali dhalinyaro baad tahay, waligaa xabsi ma gelin ka hor mana tihid nin adag, sidaa darteed goorta </text>
<text sub="clublinks" start="18.66" dur="3.42"> Waxaa lagu geyn doonaa dabaqa halkaasoo lagu dejin doono ma rumaysan kartid waxa aad aragto. </text>
<text sub="clublinks" start="22.08" dur="5.45"> Rayrooyinka unugyada oo ay ka buuxaan tiro badan oo rag ah, oo qaylinaya, qaylinaya, oo u soo baxaya baararka iyo hanjabaadda </text>
<text sub="clublinks" start="27.53" dur="1"> adiga. </text>
<text sub="clublinks" start="28.53" dur="1"> Waa fowdo daran. </text>
<text sub="clublinks" start="29.53" dur="4.32"> Qolkaaga adiga kugu sugaya waa gudi soo dhaweyn ah 20 rag cadhaysan, oo khatar ah. </text>
<text sub="clublinks" start="33.85" dur="4.26"> Ciyaartani ciyaar kuma lihid, laakiin waa inaad la dagaallanto, qalad aadan sameynin </text>
<text sub="clublinks" start="38.11" dur="1"> taasi. </text>
<text sub="clublinks" start="39.11" dur="2.04"> Adigu hadda waxaad gashay goob dagaal oo dhimasha ah. </text>
<text sub="clublinks" start="41.15" dur="4.83"> Way adag tahay in la soo xusho taas oo ah xabsiga gobolka ugu xun Mareykanka sababtoo ah wax laga xumaado inay jiraan tiro badan </text>
<text sub="clublinks" start="45.98" dur="4.989"> meelaha u tartami kara inay noqdaan kan ugu sarreeya, ama laga yaabee inaan dhahno hoosta, liiska. </text>
<text sub="clublinks" start="50.969" dur="3.721"> Cid kasta oo joogtay meesha aan maanta ka hadlayno ma xumaan doonno </text>
<text sub="clublinks" start="54.69" dur="2.869"> Waxaan u dooranay tan ugu xun, taasi waa hubaal. </text>
<text sub="clublinks" start="57.559" dur="3.631"> Waxaan oran karnaa hadii aad lahadasho dambiilayaal adadag oo xabsi galay ama kabaxsan </text>
<text sub="clublinks" start="61.19" dur="3.35"> iyo xabsiyada badanaa waxay kuu sheegi doonaan in xabsi ka sii xun yahay. </text>
<text sub="clublinks" start="64.54" dur="3.38"> Dad badani waxay yiraahdaan xabsi wuxuu uga xaq badanyahay xabsiga iyo rabshadaha inbadan. </text>
<text sub="clublinks" start="67.92" dur="3.61"> Goobta aan maanta ka hadlaynaa waxaa loogu magac daray "Naarta Jannada", iyo kadib </text>
<text sub="clublinks" start="71.53" dur="2.62"> Daraasaddeena ma aqbali doono. </text>
<text sub="clublinks" start="74.15" dur="4.3"> Waxaan dhab ahaan ka hadlayno waxaa loo yaqaannaa "Asluubta iyo Dhaqancelinta Miami-Dade </text>
<text sub="clublinks" start="78.45" dur="4.63"> Qeybta ”, oo dhab ahaantii ka kooban dhowr cutub oo ay ku jiraan Xero Boot caan ah. </text>
<text sub="clublinks" start="83.08" dur="3.6"> Kuwa aan ka soo bixin xeradaas waxay ku dambeyn doonaan xabsi, qaarna weli waa yihiin </text>
<text sub="clublinks" start="86.68" dur="1"> da 'yarta. </text>
<text sub="clublinks" start="87.68" dur="4.11"> Xerada 'Boot Camp' waa sheeko kale gebi ahaanba, laakiin waxaan dhihi karnaa marka loo barbar dhigo xabsi waa </text>
<text sub="clublinks" start="91.79" dur="1.14"> xerada fasaxa. </text>
<text sub="clublinks" start="92.93" dur="5.5"> Nidaamka oo dhami wuxuu gaarayaa 7,000 oo qof, in kasta oo wax la mid ahi ay yihiin 114,000 qof </text>
<text sub="clublinks" start="98.43" dur="4.2"> ka gudub albaabada sanad walba - taasi waa ilaa 312 maalin. </text>
<text sub="clublinks" start="102.63" dur="2.11"> Tani waa goob mashquul ah, taasi waa hubaal. </text>
<text sub="clublinks" start="104.74" dur="3.48"> Wali, waa xabsiga 7-aad ee ugu weyn Mareykanka. </text>
<text sub="clublinks" start="108.22" dur="3.64"> Maxaabiista badidoodu kuma sii nagaan doonaan halkaas iyo celceliska waqtiga lagu qaatay nidaamka oo dhan </text>
<text sub="clublinks" start="111.86" dur="4.07"> waa 22 maalmood oo keliya, laakiin sidoo kale waxaad heli doontaa dad sugaya maxkamad illaa iyo inta </text>
<text sub="clublinks" start="115.93" dur="1.74"> shan sano. </text>
<text sub="clublinks" start="117.67" dur="4.229"> Tani waxay ina keenaysaa mid ka mid ah cutubyada waaweyn, oo ah meesha ugu badan ee ku dhufanaysa cinwaannada </text>
<text sub="clublinks" start="121.899" dur="1.151"> xaaladeeda foosha xun. </text>
<text sub="clublinks" start="123.05" dur="4.98"> Waxaa lagu magacaabaa Xarunta Xiritaanka Maxkamad-Horeynta, ama mararka qaar waxaa loogu yeeraa Xabsiga weyn. </text>
<text sub="clublinks" start="128.03" dur="3.34"> Waxay sida caadiga ah deggan tahay qiyaastii 1,700 oo qof markiiba. </text>
<text sub="clublinks" start="131.37" dur="3.83"> Intooda badan dadka halkaa jooga ayaa wali farsamo ahaan ahaan aan dambi lahayn maadaama aan la xaqiijin </text>
<text sub="clublinks" start="135.2" dur="2.77"> waa dambiile, laakiin sugida taariikhda maxkamaddaas waxay qaadan kartaa sannado. </text>
<text sub="clublinks" start="137.97" dur="3.96"> Ma fududa in la dego goorta noocaan oo kale ah, iyo haddii aad dhaaftay unugyada </text>
<text sub="clublinks" start="141.93" dur="2.89"> sagxadaha qaar waxaad arki doontaa sida waxyaabaha aan weli qalloocsaneyn ay yihiin. </text>
<text sub="clublinks" start="144.82" dur="3.559"> Waxaa jira maxaabiis ka joojisay xitaa la dagaalanka kiisaskooda sababta oo ah waxay kaliya doonayaan inay helaan </text>
<text sub="clublinks" start="148.379" dur="3.781"> ka soo baxaan halkaas, oo aan dambi lahayn ama aan ahayn, waxay kaliya doonayaan inay xabsi galaan. </text>
<text sub="clublinks" start="152.16" dur="3.7"> Dabaqyada ugu xun waa halka lagu hayo dambiilayaasha ugu khatarta badan oo lagu hayo </text>
<text sub="clublinks" start="155.86" dur="1.22"> dabaqyada shan iyo lix. </text>
<text sub="clublinks" start="157.08" dur="4.44"> Unugyada halkan jooga badanaa waxay ku yaalliin meel kasta oo u dhexeysa 15 illaa 25 rag ah kooxdankana dhexdeeda ayaa ku dhex jira </text>
<text sub="clublinks" start="161.52" dur="1.249"> nooc nooc ah. </text>
<text sub="clublinks" start="162.769" dur="4.382"> Maaddaama ragga halkaa jooga ay jecel yihiin inay wax badan dhahaan, waa badbaadinta ugu habboon, marka haddii aadan ahayn </text>
<text sub="clublinks" start="167.151" dur="2.599"> dagaalyahan waxaad ku adkaan kartaa waqti adag. </text>
<text sub="clublinks" start="169.75" dur="2.6"> Waxaad u baahan tahay cufan, waa inaad u dagaallanto. </text>
<text sub="clublinks" start="172.35" dur="3.49"> Hagaag, dan kama lihid inaad hesho meesha ugu xun ee qolka, laakiin maxaa dhacaya haddii qof uun yahay </text>
<text sub="clublinks" start="175.84" dur="1.02"> qaadataa alaabtaada? </text>
<text sub="clublinks" start="176.86" dur="2.599"> Sidii maxbuus halkaas joogay ayaa yidhi, Waxaan ka faa'iidaystaa kuwa itaalka daran. </text>
<text sub="clublinks" start="179.459" dur="3.691"> Hadaadan u halgalin waxyaabahaaga waxaad heli doontaa cadaab waqti ah, taasna waxaan uga jeednaa gudaha </text>
<text sub="clublinks" start="183.15" dur="1.19"> diidmada ah. </text>
<text sub="clublinks" start="184.34" dur="4.72"> Haddii aad qunyar gasho, waa lagu garaaci doonaa meel kasta oo aad tagtid mooyee ilaalin mooyee. </text>
<text sub="clublinks" start="189.06" dur="3.899"> Sida maxbuus kale ku sheegay waraysi maalintii kuugu horeysay qolkaaga waa inaad la dagaallanto </text>
<text sub="clublinks" start="192.959" dur="2.301"> sababtoo ah waxay rabaan inay kuu eegaan sida nin. </text>
<text sub="clublinks" start="195.26" dur="1"> Laakiin waa maxay sababta? </text>
<text sub="clublinks" start="196.26" dur="3.38"> Jawaabtiisu waxay ahayd hadaadan la dagaalamin waxay calaamad u tahay in wax kaa qaldan yihiin. </text>
<text sub="clublinks" start="199.64" dur="2.269"> Waxaa laga yaabaa inaad tahay cunqabate, sababtoo ah ma dooneynin inaad la dagaallanto. </text>
<text sub="clublinks" start="201.909" dur="4.151"> Waxay u muuqataa wax aan macquul ahayn, laakiin maxbuusku wuxuu yidhi kuwanu waa xeerarkii, taasi waa xeerka. </text>
<text sub="clublinks" start="206.06" dur="4.04"> Arrinku waa, maxaabiistu marna si cad uma sharixi karaan qawaaniinta koodh. </text>
<text sub="clublinks" start="210.1" dur="4.67"> Hal nin ayaa sharxay haddii qofku aanu u hallayn hal-fool ka dibna u hogaansan Rabbiga </text>
<text sub="clublinks" start="214.77" dur="2.87"> koodhka oo dhan code u garaaci karaa qofkaas. </text>
<text sub="clublinks" start="217.64" dur="3.33"> Mararka qaarkood nin waa la garaaci karaa xadgudubka ugu yar, mararka qaarna waa laga yaabaa inuu garaaco </text>
<text sub="clublinks" start="220.97" dur="2"> lagu eedeeyay wax uusan dhab ahaantii sameynin. </text>
<text sub="clublinks" start="222.97" dur="1.5"> "Yaa xaday cuntadayda?" </text>
<text sub="clublinks" start="224.47" dur="3.03"> Cidna kama jawaabto, oo kan ugu itaal yar ayaa garaaca garaaca. </text>
<text sub="clublinks" start="227.5" dur="1.849"> Awood ma liidid, eedda waad qaadataa. </text>
<text sub="clublinks" start="229.349" dur="2.851"> Waxay ahayd inuu sameeyo, sababtoo ah wajiga ayuu luminayaa hadii uusan sameynin. </text>
<text sub="clublinks" start="232.2" dur="2.7"> Sida qof walbaa halkaas ku leeyahay, waa inaad kaliya lashaqeysaa. </text>
<text sub="clublinks" start="234.9" dur="4.039"> Waxay leeyihiin mabaadi 'aan badan oo qorin oo ay duubtaan, midna waxaa la yiraahdaa GABOS. </text>
<text sub="clublinks" start="238.939" dur="3.281"> Taasi micnaheedu waa, “Ciyaarku kuma saleysan Sympathy”. </text>
<text sub="clublinks" start="242.22" dur="3.82"> Si ka duwan xabsiyada federaalka qaarkood, uma badna in lagaa qaadi doono garabka qof kasta. </text>
<text sub="clublinks" start="246.04" dur="4.059"> Xabsigu waa habka gladiatorial-ka aad uga badan yahay xabsiga, in kasta oo aan wax yar ka maqalno arxan-darrada </text>
<text sub="clublinks" start="250.099" dur="1.081"> nidaamyada xabsiga. </text>
<text sub="clublinks" start="251.18" dur="4.01"> Kaliya gal meelaha lagu kulmo ee maxaabiista hore ay kaga hadlaan khibradooda ku saabsan sixitaanka </text>
<text sub="clublinks" start="255.19" dur="3.53"> Nidaam oo waxaad ka heli doontaa qaar badan oo iyaga ka mid ah oo sheegaya in xabsi uu ka xun yahay. </text>
<text sub="clublinks" start="258.72" dur="4.55"> Dabcan cilladaysan ayaa ah in dadka intiisa badan aan xitaa lagu helin wax dambi ah waana la daaweeyay </text>
<text sub="clublinks" start="263.27" dur="2.01"> Ka sii daraya oo wajahaya hanjabaado badan. </text>
<text sub="clublinks" start="265.28" dur="4.35"> Waqtiyada ugu horeeya runti waa cabsi badan yihiin xaalado badana waa inay ahaadaan; maskaxda </text>
<text sub="clublinks" start="269.63" dur="4.68"> aan xanuun ku haynin halkaas; cuntada waa mid cabsi leh; Unugyadu waa wasakh badan yihiin wayna ku qaataan badankood </text>
<text sub="clublinks" start="274.31" dur="1.3"> waqtiga ay ku jiraan qolka. </text>
<text sub="clublinks" start="275.61" dur="3.36"> Waxaad arki doontaa maxaabiis fara badan oo dhahaya waxay sameyn doonaan “rasaas” si ay uga baxdo taas </text>
<text sub="clublinks" start="278.97" dur="1"> godhole. </text>
<text sub="clublinks" start="279.97" dur="1.669"> Rasaasta ayaa sanad ah. </text>
<text sub="clublinks" start="281.639" dur="3.121"> Maxay maxbuusyadu u noqon lahayd guriga xaalado ka sii dara, waxaad la yaabi kartaa. </text>
<text sub="clublinks" start="284.76" dur="3.159"> Hagaag, dhab ahaan looma jeedin inay qofka muddo dheer sii hayaan. </text>
<text sub="clublinks" start="287.919" dur="4.191"> Dhibaatadu waxay tahay, xitaa waxyar oo gaaban ayaa noqon kara cadaab oo dadka qaar ayaa sameeya wax intaa ka badan a </text>
<text sub="clublinks" start="292.11" dur="2.149"> Joogista gaaban haddii maxkamaddoodu dib u dhacdo. </text>
<text sub="clublinks" start="294.259" dur="2.171"> Xabsiga waxaa laga doonayaa inuu bixiyo nooc raaxo ah… </text>
<text sub="clublinks" start="296.43" dur="4.72"> Xabsigu waa cadaabta oo leh faa iidooyin, xabsiga ayaa dareemaya xanuun joogto ah oo ku saabsan purgatory iyo qaybta ugu xun </text>
<text sub="clublinks" start="301.15" dur="1.859"> miyaadan garanayn meesha looga baxo. </text>
<text sub="clublinks" start="303.009" dur="4.111"> Sidaas darteed, maxaabiista inta badan waa kuwa xanaaq badan, xanaaq badan, iyo jahwareer, iyo mararka qaar cadaalad ah </text>
<text sub="clublinks" start="307.12" dur="3.63"> doqon cad ah ka dib markii uu ka soo baxay 18-bilood oo crank-athon. </text>
<text sub="clublinks" start="310.75" dur="3.13"> Waxaas oo dhami, mala-awaalaa in loo diro meelaha ugu xun meelahaas? </text>
<text sub="clublinks" start="313.88" dur="4.379"> Aan ku soo noqonno adiga oo lagaa qaadayo dabaqa 6-aad ee Miami. </text>
<text sub="clublinks" start="318.259" dur="3.861"> Mar qolkii waardiyayaashu way baxayaan, waardiyaashaasuna waxay qirteen inaysan ka jawaabi karin </text>
<text sub="clublinks" start="322.12" dur="2.03"> in rabshadu si dhakhso leh u joojiso. </text>
<text sub="clublinks" start="324.15" dur="2.57"> Waxay qireen inay uga baxaan maxaabiista xeerarkooda. </text>
<text sub="clublinks" start="326.72" dur="3.6"> Waardiyaashaas ayaa si cad u sheegaya inaysan jirin wax ay ka qaban karaan garaacista daran, </text>
<text sub="clublinks" start="330.32" dur="1.37"> xatooyada, xatooyada. </text>
<text sub="clublinks" start="331.69" dur="3.34"> Kaliya kuma filna inay joogaan meel kasta oo ay arkaan wax walba. </text>
<text sub="clublinks" start="335.03" dur="4.17"> Mar alla markii ilaaladaasi kaa baxo, waxaa kuu hartay inaad kula dagaallanto dabaqa 5-aad iyo 6-aad ee </text>
<text sub="clublinks" start="339.2" dur="2.469"> foosha xun, dhisme hore ee bunni ah. </text>
<text sub="clublinks" start="341.669" dur="1"> Laakiin waa maxay sababta? </text>
<text sub="clublinks" start="342.669" dur="1.361"> Maxay iyagu iskumar u waayaan? </text>
<text sub="clublinks" start="344.03" dur="2.729"> Mid ka mid ah maxbuuska ayaa ku jawaabay, isaga oo leh, "Koodhku waa furaha." </text>
<text sub="clublinks" start="346.759" dur="1.19"> Taasi micneheedu waa maxay? </text>
<text sub="clublinks" start="347.949" dur="3.981"> Waxaa loola jeedaa haddii lagu arko inaad ixtiraam la'aan u muujisay qof aad la dagaallameyso, waad iska dhega tiraysaa. </text>
<text sub="clublinks" start="351.93" dur="4.2"> Qofna sabab umalaha sababta oo ah meeshaani maahan meel macquul ah oo lagu bilaabi karo. </text>
<text sub="clublinks" start="356.13" dur="4.349"> Waxay yiraahdaan dadku kama socdaan wadooyinka, ma dhahaan fahma koodhka jidadka. </text>
<text sub="clublinks" start="360.479" dur="3.681"> Nooca noocan ah ee galbeedka dabiiciga ah wuxuu ku laabanayaa waxa saynisyahannadu ugu yeereen a, “dhaqan </text>
<text sub="clublinks" start="364.16" dur="1"> sharaf. " </text>
<text sub="clublinks" start="365.16" dur="4.09"> Waxaad quudhsaneysaa nin, waad la dagaallami doontaa, oo seefo baad soo jiidan doontaa, toban meelood ayaad qaadanaysaa oo toogataa. </text>
<text sub="clublinks" start="369.25" dur="4.069"> Gudaha dibada waxaan tan uga soo baxnay inta badan, laakiin gudaha xabsiga </text>
<text sub="clublinks" start="373.319" dur="3.231"> koodhkan, dhaqankan sharafta leh, ayaa wali ku jira waayitaan. </text>
<text sub="clublinks" start="376.55" dur="4.18"> Xagga sare ee tuugada iyo la dagaalanka xabsiga weyn ee Miami waxaa lagu magacaabaa midka ugu xun </text>
<text sub="clublinks" start="380.73" dur="3.23"> gudaha Ameerika noocyo kale oo xadgudub ah oo lab ah. </text>
<text sub="clublinks" start="383.96" dur="3.84"> Waxyaabo argagax leh ayaa dhici kara markay waardiyayaashu kaliya kormeeraan unugyada hal mar saacaddii. </text>
<text sub="clublinks" start="387.8" dur="3.54"> Maxaabiista weaker ka hadhay waxay ugaadhsadeen uun ugaadhsadeyaasha. </text>
<text sub="clublinks" start="391.34" dur="4.09"> Nasiib wanaagse, xabsigu wuxuu sameeyay horumar badan sanadihii ugu dambeeyay, mid baa waxbadan sii kordha </text>
<text sub="clublinks" start="395.43" dur="2.269"> kaamirooyin ayaa la rakibay. </text>
<text sub="clublinks" start="397.699" dur="4.44"> Markaa waxa jira arin ku saabsan gurigan xabsi dad badan oo qaata dawooyinka dhimirka. </text>
<text sub="clublinks" start="402.139" dur="4.241"> Dagaalada maxaabiista waxay badanaa kala baxaan marka qof maskaxda ka jiran ahi u dhaqmayo qaab maxaabiista kale </text>
<text sub="clublinks" start="406.38" dur="1"> ma jecli. </text>
<text sub="clublinks" start="407.38" dur="3.88"> Sida Mashruuca Marshall uu sheegay, “Nidaamka xabsi ee Miami waa hay'adda ugu weyn ee loogu talagalay </text>
<text sub="clublinks" start="411.26" dur="1.7"> dadka maskaxda ka jiran ee Florida. ” </text>
<text sub="clublinks" start="412.96" dur="4.42"> Dadka dhimirka wax u dhinta badanaa waxay noqdaan ubax, oo dabaqa ayey ku soo dhacayaan iyagoo 20 nin qaadanaya </text>
<text sub="clublinks" start="417.38" dur="1.39"> u leexanayaa inuu jebiyo. </text>
<text sub="clublinks" start="418.77" dur="2.23"> Sidan ayaa loola dhaqmaa ka bixitaanka. </text>
<text sub="clublinks" start="421" dur="2.58"> Maalin kasta dadku waxay ku socdaan oo ka baxaan bukaan socodka. </text>
<text sub="clublinks" start="423.58" dur="2.25"> Waxay la mid tahay albaab albaab rogid ah oo dhiig ku daadanaya. </text>
<text sub="clublinks" start="425.83" dur="4.18"> Xaqiiqdii, waxaa jiray rabshado aad u badan oo ay Wasaaradda Caddaaladda sheegtay Miami-Dade </text>
<text sub="clublinks" start="430.01" dur="5.409"> Nidaamka xabsiga ayaa loo daayay maxaabiista iyo maxaabiista sidoo kale waardiyayaashu waxay la kulmeen qatar badan. </text>
<text sub="clublinks" start="435.419" dur="1.84"> Waa in wax la qabtaa, ayay tidhi waaxdu. </text>
<text sub="clublinks" start="437.259" dur="4.771"> Dhowr sano dib ayaa xabsiga loo wajahay baaritaan badan kadib markii sideed qof ay dhinteen shan bilood gudahood. </text>
<text sub="clublinks" start="442.03" dur="5.1"> DoJ wuxuu sheegay in saddexda dhimashada ee dadka dhimirka wax ka qaba ay gaar ahaan khalkhal gelinayeen. </text>
<text sub="clublinks" start="447.13" dur="4.39"> Hal nin oo baabuur wada markii la hakiyey wuxuu galay Sabtidii wuuna dhintay kan ku xigay </text>
<text sub="clublinks" start="451.52" dur="1"> Isniinta. </text>
<text sub="clublinks" start="452.52" dur="3.869"> Laba kale ayaa ku dhimatay usbuuc gudihiis, oo uu gudoomiye kuxirku sheegay in nidaamku yahay "mid aad u jaban." </text>
<text sub="clublinks" start="456.389" dur="4.601"> Waxaa soo baxday in sideed ka mid ah ee dhintay mid ka booday dhul gariir si uu uga baxsado maxaabiista </text>
<text sub="clublinks" start="460.99" dur="1.76"> waxaa ku soo socday isaga si ay u garaacaan. </text>
<text sub="clublinks" start="462.75" dur="1.62"> Midiyaha ayaa sidoo kale la sheegay. </text>
<text sub="clublinks" start="464.37" dur="4.04"> Dabaqa ugu xumaa, kaas oo tan iyo markii la xiray, waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa "Dhulka la ilaaway." </text>
<text sub="clublinks" start="468.41" dur="3.979"> Waxay ahayd heerka sagaalaad oo inta badan dadka maskaxda ka jirran lagu hayo. </text>
<text sub="clublinks" start="472.389" dur="3.861"> Halkaas ayaa ah halka maxaabiista inta badan looga tago oo la dayaco, xaalado badana way qaateen </text>
<text sub="clublinks" start="476.25" dur="1.55"> naftiisa. </text>
<text sub="clublinks" start="477.8" dur="3.92"> Gelinka dambe ee maanta heerkan maxaabiista ayaa dhulka seexday iyada oo aan busteyaal lahayn, in kastoo </text>
<text sub="clublinks" start="481.72" dur="2.91"> xarun cilmi-nafsi oo loo malaynayay inay ahayd mid bini-aadamnimo. </text>
<text sub="clublinks" start="484.63" dur="3.759"> Qaar ka mid ah maxaabiista ayaa la ogaaday inay ka cabanayaan musqulo, markii ay tani dhacdana warka ayaa meesha yaala </text>
<text sub="clublinks" start="488.389" dur="1.24"> waxaa loogu yeeray, "naxdin leh". </text>
<text sub="clublinks" start="489.629" dur="1.401"> Waxaa jiray qaylo dadweyne. </text>
<text sub="clublinks" start="491.03" dur="3.65"> Laakiin sidaad maqashay, weli waxaa jira dhibaatooyin marka qof maskaxda ka jiran uu quful galo </text>
<text sub="clublinks" start="494.68" dur="5.84"> la socda gladiators-ka waddooyinka ee casriga ah iyo xoogsheegashada kuwaas oo nambarkoodu uu ka maqan yahay qiimeynta aadanaha. </text>
<text sub="clublinks" start="500.52" dur="4.84"> Dhamaan sagxadaha oo dhami uma xuma sida sheekooyinka aan ka wada hadalnay, iyo xaaladaha qaarkood gaar ahaan </text>
<text sub="clublinks" start="505.36" dur="2.81"> dadka khatarta ah ama nugul ayaa keligood la degi doonaa. </text>
<text sub="clublinks" start="508.17" dur="4.24"> Si kastaba ha noqotee, ku soo afmeer mid ka mid ah dabaqyadaas dhaadheer ee ku jira xabsiga ugu weyn oo waad iska hubin doontaa </text>
<text sub="clublinks" start="512.41" dur="4.66"> Waxa ay u egtahay in lagu xidho mid ka mid ah xabsiyada ugu adag adduunka. </text>
<text sub="clublinks" start="517.07" dur="3.82"> Dhibaatooyin kale ayaa jira, sidoo kale, ilk aan caadi ahayn. </text>
<text sub="clublinks" start="520.89" dur="5.35"> Sanadka 2019, 17 qof ayaa loola cararay isbitaal meeshan sababtoo ah xoogaa xanuun lama filaan ah. </text>
<text sub="clublinks" start="526.24" dur="1.76"> Dhowr shaqaale ayaa la yimid, sidoo kale. </text>
<text sub="clublinks" start="528" dur="1"> Maxaa dhacay? </text>
<text sub="clublinks" start="529" dur="1.35"> Runtii qofna ma ogaan. </text>
<text sub="clublinks" start="530.35" dur="3.66"> Kooxda bambaanooyinka xitaa waa la wacay ka dib markii dareere qariib ah la helay, laakiin taasi waa noqotey </text>
<text sub="clublinks" start="534.01" dur="1.09"> inay dhib la'aan. </text>
<text sub="clublinks" start="535.1" dur="4.23"> Sababta ugu badan ee dadku hadda u billaabeen xaraashka waa qiiqa qiiqa qaar ka mid ah sunta </text>
<text sub="clublinks" start="539.33" dur="1"> daroogada. </text>
<text sub="clublinks" start="540.33" dur="3.75"> Haddii qiiqa neefsashada meel fog ka dhacey ay qofka ku hoos gelin karto lallabo xun, </text>
<text sub="clublinks" start="544.08" dur="2.24"> Maxay dhulka ku cabayeen sigaar dhexdeeda? </text>
<text sub="clublinks" start="546.32" dur="1"> Gaaska dareeraha ah? </text>
<text sub="clublinks" start="547.32" dur="2.36"> Kaliya waxay muujineysaa sida ay u waalan tahay meeshaas. </text>
<text sub="clublinks" start="549.68" dur="4.37"> Waxaan kaaga tageynaa dib u eegis aan ku aragnay bogga Facebook ee loogu talagalay xabsigaan: </text>
<text sub="clublinks" start="554.05" dur="1.12"> Ku soo dhawow cadaabta. </text>
<text sub="clublinks" start="555.17" dur="4.77"> Qofku wuu ka fiicnaan lahaa inuu dhinto intii uu sii adkaysan lahaa xadgudubka iyo silica lagu hayo </text>
<text sub="clublinks" start="559.94" dur="3.05"> qashinkan wasakhda ah, ee wasakhda leh. ” </text>
<text sub="clublinks" start="562.99" dur="4.21"> Ma dooneysid in laguu diro Miami Jail laakiin waxaad dooneysaa inaad gujiso mid ka mid ah labadan </text>
<text sub="clublinks" start="567.2" dur="1"> fiidiyowyo. </text>
<text sub="clublinks" start="568.2" dur="4.36"> Haddaba u daawo fiidiyaha hadda fiidiyowga kale ee weyn ee loo yaqaan 'Infographics Show ama kan' </text>
<text sub="clublinks" start="572.56" dur="1"> halkan </text>
<text sub="clublinks" start="573.56" dur="3.48"> Waxaad dooran kartaa mid uun haddii aad doorato oo u fiirso fiidyow kale hadda! </text>